Raiso, raiso, raiso | Fondation des Choisis de Jésus
Raiso, raiso, raiso
2A_10: Ry zanaky ny Foko, nanome « eny » betsaka ianao ; Mitaky « eny » hafa fanampiny ny Ray mba hamitany ny sanganasan’ny Fitiavana izay ianao ihany. Aza mandany andro mijery ny tenanao, na koa manontany tena. Tazony mitodika eo amin’ny Ray ny fijerinao, banjino ny Fitiavany. Aza mitady ny mba ho mendrika an’izany, satria tsy ho mendrika ny Fitiavany mandrakizay ianao, tsy ho vitanao mandrakizay ny ho mendrika ny Fitiavana lavorary. Raiso, raiso, raiso ny Fiantrany, ny Famindram-pony sy ny Fitiavany, satria izany no tiany ho tanteraka.